Fossil ine dzakasiyana siyana mawatchwatches, asi ndeipi iwe yaunofanira kutora?
Dai 14, 2021 by bartez64
Kana iwe uri mumusika weiyo nyowani Wear OS smartwatch uye woitika kuti ude zvakajairika zvakagadzirwa mawatch, saka iyo Zvisaririra Gen 5 Carlyle ichave yako. Fossil ndeimwe yevashoma Wear OS vatariri kunze uko izvo zvinoramba zvichingogadzira kwete chete zvinooneka zvinotaridzika zvipfeko asi zvakare zvinowedzera zvepamusoro-zve-e-mutsara mitsara kune iyo equation. Iyo Carlyle ine yechinyakare kutaridzika iyo inogona kushandira ingangoita chero chiitiko nemachinjika mabhendi, snappy performance, uye mutauri wekufona. Fossil ine dzimwe sarudzo hombe futi. Kunyangwe iri yekutarisa yemitambo, fashoni, kana kunyangwe wachi yemasanganiswa - Fossil ine sarudzo yako.
Zvakanakisa pane zvese: Zvisaririra Gen 5 Carlyle
Ipo Wear OS inogona kunge iine zvikanganiso, iyo Zvisaririra Gen 5 Carlyle anoita basa rinonakidza kuita akanakisa emamiriro ezvinhu akanaka. Kubva pamaonero echitaira, iyo Carlyle ine zvese zvigadzirwa zveiyo yakasarudzika wachi ine yayo yakapoteredzwa casing uye matatu-bhatani dhizaini. Iwe une korona inotenderera iyo inoita kuti iwe udzore kuburikidza nezviziviso, maapplication uye nekuita sarudzo dzekufambisa OS. Mabhatani akarongeka akaisa korona kune ese mativi ayo anonamira kune mamwe maapplication kana mabasa aunoda.
Kudzokera kune iyo kesi kwechinguva, iyo 44mm wachi inouya mune maviri mavara sarudzo nesimbi isina simbi yesirivha uye yakasviba simbi sarudzo. Vanogona yega yega kugadziridzwa neyakajairwa 22mm wachi bhendi iyo inobvumidza zvishoma yekuchinjika kune zvirinani mesh nemaitiro ako. Zviri nyore kuwana Fossil Gen 5 zvisungo zvinoenderana nemaitiro ako. Tichifunga nezve huwandu hwetekinoroji yakarongedzwa mune ino wachi, chishandiso chinoshamisira chihure uye chakareruka icho chinoita kuti icho chinenge chazove chekufungidzira kusvikira iwe uchichida icho.
Kana zviri zve tech mukati, iwe unowana inoratidzika AMOLED kuratidza iyo inopa inogara-pane maonero. Iko kukanganisa kukuru kwechiratidziro ichi ndechekuti inogona kuve tad pane yakasviba zuva rakananga zuva. Mukati meiyo wachi inouya neiyo Snapdragon 3100 processor, 1GB RAM, 8GB kuchengetedza, NFC yekubhadhara, uye GPS. Pamwe chete neGPS yekutevera, kune zvakare moyo wekutarisa kuti ubatsire mukutevera kugwinya. Kanda mukati matatu ATM mvura inodzivisa, uye iyo Carlyle ipakeji yakazara yemavara uye mashandiro ayo anobatsira kuita ichi chakanakisa Fossil inofanira kupa.
Snapdragon 3100 uye 1GB RAM
Lightweight uye dzemhando yepamusoro
Microphone & mutauri
Hupenyu hwebhatiri hunogona kuve nani
Chidzitiro chacho chakadzikira masikati machena
Zvinyorwa zveFossil Gen 5 Carlyle Stainless Simbi Yekubata Smartwatch
Kubva ku $ 240 kuAmazon
$ 295 paWalmart
Yakasarudzika kunze, ramangwana mu
ICarlyle iri nyore nyore Fossil smartwatch yevashandisi vazhinji. Inogona kuenda chero kupi ichikuendesa iwe kuburikidza nezuva mune dhizaini.
Kukosha kwakanyanya: Fossil Gen 4 Kutengesa HR
Zvakawanda sekuhwina kwedu kwese, iyo Zvisaririra Gen 4 Venture HR inopa yakasarudzika wachi stylings ine yakasimba emukati maficha eakanakisa kupfeka chiitiko. Iyo inouya mune imwe 40mm kesi ine akawanda mavara sarudzo uye 18mm inokwenenzverwa mawatch mabhendi, ichikuita kuti iwe utsvage musanganiswa unonyatsokodzera maitiro ako. Iyo isina simbi kesi inogara dzimba dzinoverengeka sensors, kusanganisira NFC, GPS, uye yemoyo yekutarisa. Iwe zvakare unowana iwo mabhenefiti mamwechete eiyo matatu-bhatani dhizaini sezvatakaita kubva kuCarlyle nemabhatani maviri anogadzirisika uye nekorona inotenderera.
Wachi iyi inouya neiyo yakakwegura Snapdragon 2100, uye ichiri yakavimbika processor, iine chete 512MB ye RAM, wachi inogona kunge ine husimbe dzimwe nguva. Chiratidziro chakajeka iseti inogamuchirwa, kunyangwe rakadzima muzuva rakananga, nemavara ayo akasarudzika uye inogara iri-pane sarudzo. Iyo inosanganisirwa 3 ATM yekudzivirira mvura zvinoreva kuti wachi yako yakachengeteka kubva kunodonha, mvura uye inogona kunyange kuteedzera kushambira kwako.
Nekudaro, kana iwe uchitsvaga inokwezva Fossil smartwatch uye iwe ungade kuchengetedza imwe mari, iyo Fossil Gen 4 Venture HR yakanaka yekutarisa.
Stylish uye yakasimba kuvaka
Multiple dhizaini sarudzo
Mukuru processor uye chete 512MB RAM
Hupenyu hwebhatiri hwashaikwa
Fossil Gen 4 Kutengesa HR
Kubva ku $ 219 kuAmazon
Yakanaka inotaridzika wachi, uye mutengo unonaka
Iyo Fossil Venture HR inguva yeGen 4, asi ichine zvakawanda zvekupa. Iwe unowana ese akakosha sensors neati kure zvishoma tech.
Zvakanakisa kugwinya: Fossil Sport
Kana zvasvika kune yakatarisa-inosimbisa wachi, mashoma akakosha zvinhu anoda kusangana. Iyo wachi inoda kuve nema sensors ekutsvaga data, kuve akareruka, uye bhatiri kuti upfuure panguva yako yekudzidzira zvikamu. Iyo Fossil Sport ine zvese izvo uyezve nezvimwe. Fossil yauya newachi iyo isingomhanye iyo chete Qualcomm Snapdragon 3100 processor asi inotaridzika zvakanaka uchichengeta nekushanda kwako.
Iyo dhizaini yeMitambo inoratidzira 41mm maviri-toni kesi ine nylon base uye anodized aluminium pamusoro. Aya sarudzo yezvinhu anotendera akawanda emhando sarudzo, kubva pane yakajairwa sirivheri uye grey kusvika kutsvuku uye bhuruu, iine pink negoridhe mumusanganiswa. Uchishandisa iwo matatu-bhatani dhizaini seCarlyle, iyo Sport ine maitiro uye mashandiro ekuramba uine iwe mune chero mamiriro.
Mutambo unoenda kune zvigunwe zvigunwe pamwe neGen 5 Carlyle mune zvakawanda zvinhu, asi iyo imwe nzvimbo iyo painopfupika ndeye RAM maererano nezve zvemukati zvekufungidzira. Kunyangwe ivo vakasarudza iyo nyowani processor, zvinosuruvarisa, zvinokanganiswa nekuisirwa chete 512MB ye RAM, izvo zvinoita kuti OS ive nehusimbe zvakanyanya kupfuura zvaungade. Kunze kweiyi misstep, Fossil yakamomotera GPS, moyo wekutevera, 5 ATM mvura-kuramba, altimeter, NFC yekubhadhara, uye zvimwe mune wachi isina kureruka. Saka kana iwe uchida wachi ine imwe pizazz iwe uchinge waita ziya rako pa, iyo Fossil Sport ingori tikiti.
Mazhinji mavara esarudzo
Chete ine 512MB RAM
Kurwisana mubazi rebheteri
$ 219 ku Amazon
Sweatin 'ine tech
Mutambo waFossil une ma sensors ese ekuteedzera mashandiro. Izvo zvinongoshaya bhuru mune RAM uye hupenyu huri nani hwebhatiri.
Yakanakisa LTE: Zvisaririra Gen 5 LTE
Mazuva ano, makambani mazhinji uye mazhinji ari kubuda nehunyanzvi hwetekinoroji, achichinja indasitiri inosakara sekuziva kwedu Mumwe muenzaniso ndeye smartwatches ine LTE yekubatanidza, senge iyo Zvisaririra Gen 5 LTE, Semuyenzaniso. Iyi ndiyo yekutanga LTE smartwatch kubva kuFossil, saka zvakaita kunge chinhu chikuru.
Kana iwe uri kutarisira shanduko huru kubva kune yekutanga Gen 5 mamodheru, unogona kusuwa. Musiyano mukuru ndewekuti smartwatch yako ichave nekubatana kweLTE kuburikidza neVerizon. Izvi zvinoreva kuti uchave nesarudzo yekusiya foni yako kumba kana iwe uchinge uchimhanya kana kurova iyo gym. Iwe uchiri kugashira mafoni, zvinyorwa, uye zviziviso pawachi yako. Iwe uchiri kuwana iyo 45mm kesi yesimbi isina simbi ine mabhendi anochinjika. Mavara maviri chete sarudzo iSmoke uye Rose goridhe.
Kuti utorezve, iwo musimboti maficha ari paGen 5 mamodheru anotakura achienda kuGen 5 LTE anosanganisira GPS, moyo-chiyero chekutarisa, chiitiko / hutano hwekutarisa, Google, Bhadhara, uye Google Mubatsiri. Zvekare, Fossil yakasarudza yechinyakare Snapdragon Wear 3100 maitiro. Iko kuita kwacho kuchine hunhu pamhando dzeGen 5 LTE, asi inogona kunge iri nyika dziri pamberi ne 4100 chipset. Kana iwe wakagadzwa pane Fossil smartwatch ine LTE yekubatanidza, iwe unogona kusazvifunga izvo zvinokanganisa kana iyo yakakwira kubvunza mutengo.
Chiitiko / hutano hwekutevera
Yakarasika Snapdragon 4100 processor
Inoenderana chete neVerizon Wireless
Maviri chete sarudzo dzemavara / akasiyana
Zvisaririra Gen 5 LTE Smartwatch
$ 349 kuFossil
$ 349 kuVerizon
Tora LTE yako pa
Pamwe wanga uchichengetera Fossil smartwatch ine LTE yekubatanidza. Kana zvirizvo, iwe uchada iyo Fossil Gen 5 LTE!
Zvakanakisa zvemafashoni: Zvinyorwa Gen 5 Julianna
kana Zvinyorwa Gen 5 Julianna inotaridzika kunge inozivikanwa, imo nekuti ndeye vakadzi vhezheni yeCarlyle. Iwe unenge uine ese akafanana akafanana maficha ane mamwe echikadzi dhizaini sarudzo. Pasina kutaura kuti pane akawanda akasiyana Julianna mamodheru ekutora kubva, saka unogona kusarudza iyo inonyatsoenderana neako aesthetic.
Naiyo Julianna, Fossil yakarongedza zvese izvo Gen 5 Carlyle inofanirwa kupa mune inopfekeka neine zvishoma zvishoma fashoni pfungwa. Iyo Julianna inowana imwecheteyo Snapdragon 3100 processor, 1GB RAM, 8GB yekuchengetera, maikorofoni, mutauri, uye nezvimwe zvese zvakanakisa zvemukati - paunenge uchizviputira mupakeji yekumira-kunze.
Iyo Julianna inopa maviri kesi masitayera eiyo 44mm yayo nhema uye yakasimuka goridhe, uyezve rozi regoridhe rine matombo akapinza akatenderedza kesi. Iyo wachi zvakare inosanganisira Fossil's-matatu-bhatani dhizaini, uye yakajairika inochinjika 22mm wachi bhendi. Iyo Julianna ndeye smartwatch yemunhu anoda kunzvenga FOMO achitaridzika zvikuru achizviita. Pasina kutaura ndeimwe yeiyo akanakisa smartwatches evakadzi.
Yakasarudzika fashoni masitadhi eiyi kesi
Kubatanidzwa kwemukurukuri uye maikorofoni
Iyo inoratidzira yakasviba zvakanyanya muzuva rakananga
Husingagutsi hupenyu hwebhatiri
Zvinyorwa zveFossil Gen 5 Julianna Stainless Simbi Touchscreen Smartwatch
Kubva ku $ 179 kuAmazon
Tarisa zvakanaka uchigara wakabatana
Kazhinji, fashional smartwatches inowanzo skimp pane tech, kwete zvakadaro neJulianna. Iyo tekinoroji yakanaka sekugadzirwa kwayo.
Zvakanakisisa zvezvakakosha: Zvisaririra Gen 5E
Panguva ino, kune akawanda akasiyana maGen 5 mhando mune yeFossil mutsara. Imwe yeazvino yekuwedzera ndeye iyo Zvisaririra Gen 5E. Iyi Fossil smartwatch inowanikwa mumhando dzakasiyana dzakanangana nefashoni yevarume nevakadzi. Musiyano chete pakati peaya mamodheru dhizaini. Iwo mamodheru evarume anowanikwa mune hombe 44mm kesi inoenderana nemakumi maviri nemaviri mabhendi anogona kuchinjika. Iwo mamodheru evakadzi anowanikwa mune diki 22mm kesi inoenderana ne42mm inochinjika mabhendi. Chero ipi modhi yaunoda, pane matani e Fossil Gen 5E zvisungo kusarudza kubva.
Pamusoro, smartwatch iyi inogona kunge isingaite seyakanyanya kupfuura mararamiro ako epamusoro anopfeka. Tarisa uone pasi pehodhi, uye iwe uchaona kune zvakawanda zvekuda. Iyo Fossil Gen 5E smartwatch inomhanya pane iyo Snapdragon Wear 3100 processor uye inopa 1GB ye RAM, kuti iwe unzwisise mashandiro akanaka. Iwe zvakare unowana moyo-chiyero yekutarisa, chiitiko / kurara kuteedzera, mimhanzi zvinodzora, Google Mubatsiri, NFC yeGoogle Pay, uye VO2 max fungidziro. Iwe unogona kutora kunyange mafoni eBluetooth pane yako wachi ine yakavakirwa-mukati maikorofoni uye mutauri. Pasina kushamisika, bhatiri rinozogara kwezuva zvakanyanya, asi maGen 5E mamodheru ane chimbi yekuchaja inokurumidza iyo inogona kuita kuti wachi yako isvike ku80% bhatiri mune isingasviki awa.
Chii chisipo? Kutanga uye pamberi pezvese, wachi iyi inogona kuve yakanyanya kunakidza neiyo Snapdragon Wear 4100 chipset uye yekuwedzera yekuchengetedza. Iyo zvakare haina kupa pabhodhi GPS, saka uchafanirwa kubatanidza kune yako foni GPS kuti utarise yako nzira panguva yekushanda Nezvo zvataurwa, iri sarudzo yakasimba kune avo vanoda izvo zvekutanga uye dhizaini dhizaina pamutengo wakaringana.
Mhando dzakawanda dzevakadzi vakadzi
-Kuita / yekurara yekutevera
Hupenyu hwebhatiri pfupi
Inoshaya pabhodhi GPS
Yakarasika Snapdragon Wear 4100
Zvakanakisa pane zvekutanga
Zvisaririra Gen 5E
Kana iwe uchida smartwatch yakashongedzwa iyo inogona kubata izvo zvekutanga, usatarise kupfuura iyo inoshamisa uye inoshanda Fossil Gen 5E.
Yakanakisa wachi yemasanganiswa: Zvakasarudzika Mbeu dzakauchikwa HR
Dzimwe nguva iwe unoda kunakidzwa nemawatchwatch maficha uchiri kunakidzwa neyekare dhizaini. Ndipo panopinda mawindow smartwatches. Aya akasiyana dhizaini anotendera iwe kutamba mutambo wechinyakare uchiri neyakagadzika maficha. Zvinogona kunge zvisina kufanana nezvimwe zvezvimwe zvemberi sarudzo pane iyi chinyorwa, asi iyo Zvakasarudzika Mbeu dzakauchikwa HR ine zvakaringana maficha kuti uwane iyo iyo "smart" zita.
Imwe yemakakatanwa akakosha ndeyekuti iwe hauzove nekabata yekubata. Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuve wakasununguka kuita yako yese yekufamba-famba nematatu emativi mabhatani pane wachi. Tichiri pamusoro wenyaya wechiratidziri, newewo hauzove nekuratidzwa kune mavara. Kana paine chero nyaradzo, izvi zvinoguma kweanopfuura mavhiki maviri ehupenyu hwebhatiri.
Iwe zvakare uchave nesarudzo yekugadzirisa iyo kuratidza kuti uwane zvaunofarira. Iwe unogona kukurumidza kutarisa kune ese eruzivo rwakakosha kwauri, senge matanho ezuva nezuva, mamiriro ekunze, uye notisi dze smartphone. Zvimwe kunze kweyakajairwa zviitiko / yekurara kuteedzera uye moyo-chiyero chekutarisa, usatarisira mune-yakadzika data senge akawanda mamwe smartwatches anopa. Inonzi yakasanganiswa nechikonzero: iwe unowana zvakanakisa zvepasirese nyika. Zvimwe zvezvimwe zvinhu zvaunenge uchipa kana iwe ukatenga musanganiswa smartwatch sanganisira maGPS sarudzo, nharembozha, uye mimhanzi kuchengetedza.
Anopfuura mavhiki maviri ehupenyu hwebhatiri
Zvimiro zvacho zvishoma
Hapana sarudzo dzeGPS
Kwete yeavo vanoda kwakadzika kuteedzera
Yakanakisa wachi yemasanganiswa
Kubva ku $ 139 kuAmazon
$ 158 paWalmart
Ngatipei ruoko (s)
Kutarisa kunakidzwa nezvimwe zvinoshamisa smartwatch maficha pasina kupira hupenyu hwebhatiri kana maitiro? Iyo Fossil Hybrid HR isarudzo yakanaka.
Yakanakisa fossil smartwatch: Kuita sarudzo
Kune akawanda makuru Android smartwatches pamusika. Izvo hazvifanire kushamisika kuti mazhinji acho ari kumhanyisa Google's Wear OS software. Nekudaro, haazi ese maWear OS zvishandiso zvakagadzirwa zvakaenzana. Nhau dzakanaka ndedzekuti Fossil ine dzakasiyana siyana smartwatches iwe kuti utore kubva.
Haisi iyo mhando nyowani kubva kukambani, asi iyo Gen 5 Carlyle ichiri imwe yemawadhi akanakisa eFossil aunogona kutenga. Pane zvakawanda zvekunakidzwa, kusanganisira yakakwidziridzwa dhizaini ine kugona kuita. Ichi ndicho chikonzero iyo Fossil Gen 5 Julianna zvakare yakasarudzika sarudza kana iwe uchida yepamusoro-inoita wachi pamwe neye yakawedzera fashoni flair inoitirwa vakadzi.
Ehe, pane zvakawanda zvimwe zvingasarudzika zvekutarisa. Kana kuita kwako kwekuda kusiri kwakanyanya uye uchida kuchengetedza imwe mari, ipapo ungangodaro unofara neFossil Gen 4 Venture HR. Kana kugwinya kuri iko kwekutarisa kwako, iwe unoda wachi inoita zvakafanana - uye iyo Fossil Sport yakakodzera zvakakwana. Ramba uchifunga kuti mutengo unowanzo shanduka kune aya ekare mamodheru, asi iwo anowanzo kuwanikwa pamitengo yakaderera mitengo kupfuura iwo mamodheru matsva.
Pamwe iwe unogutsikana nezvakadzika uye unoda imwe yemafosswatch matsva eFossil. Kana zvirizvo, iyo Fossil Gen 5E inogona kuwedzera kukurumidza kwako. Kana iwe usine hanya nekushandisa yakanaka peni uye uchida modhi ine LTE yekubatanidza, iwe unozokoshesa iyo nyowani Fossil Gen 5 LTE modhi.
Zvisinei nerudzii rwechiitiko iwe chauri kutsvaga, hapana kushomeka kwesarudzo. Unogona kuzorora uine chokwadi chekuti unogashira yakasimba inopfekedzwa yakazara nezvinhu paunotenga Fossil smartwatch.
Iwe unogona ikozvino kuisa maoko ako pamafossil matsva eGen 5E smartwatches muIndia [Kwidziridzo: Michael Kors Darci]
Fossil Q Kudzora kuongorora: Maitiro ese uye hapana chinhu
Yakanakisa smartwatch 2020: yepamusoro yekupfeka zvaunogona kutenga nhasi